बिहान अबेरसम्म सुत्नुहुन्छ ? सावधान ! लाग्न सक्छन् यस्ता भयानक रोग
२४ पुष २०७५, मंगलवार ११:५४
काठमाडौं । सुत्नु मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर दैनिक जीवनयापनका लागि समेत अनिवार्य कर्म हो । सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरीरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान राख्छ । तर, बिहान अबेर सम्म सुत्ने गरियो भने त्यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
वयस्कहरुका लागि दिनको ७ देखि बढिमा ९ घण्टासम्मको सुताइ पर्याप्त हुन्छ । तर, यदि कोही मानिस रातमा ९ घण्टा भन्दा बढि सुत्न थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ उसमा केही स्वास्थ्य समस्या छ । बढि सुत्ने मानिसमा विभिन्न खाले रोगको डर पनि बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
कम सुत्दा शरीर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक असरबारे बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
मोटोपना र धेरै समयसम्म सुत्नुका बिच सम्बन्ध छ । यदि तपाईं लामो समयसम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईंको शरीर आराम मोडमा हुन्छ । कम शारीरिक गतिविधि कम हुँदा शरीरको तौल बढ्ने हुन्छ ।
एक अध्ययनका अनुसार धेरैबेरसम्म सुत्ने मानिसहरु मनोवैज्ञानिक रोगी हुन्छन् । सन्तुलित भोजनका बाबजुद दिनमा ९ देखि १० घण्टासम्म सुत्ने मानिसहरुमा ६ वर्षको अवधिमा ५ किलो तौल बढ्ने सम्भावना २५ प्रतिशत देखिएको छ ।
सन् २०१४ मा वयस्क जुम्ल्याहाहरुमा गरिएको अध्ययनले आवश्यकता भन्दा लामो सुताइका कारण मानिसहरुमा डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिने तथ्य पत्ता लगाएको थियो । जसमा ७ देखि ९ घण्टासम्म सुत्ने मानिसमा २७ प्रतिशत पुख्यौली डिप्रेसनको लक्षण र ९ घण्टाभन्दा बढि सुत्नेहरुमा ४९ प्रतिशत डिप्रेसनको लक्षण देखाइएको छ । अध्ययन अनुसार दिनमा ९ घण्टाभन्दा बढि सुत्ने महिलाहरुको मस्तिष्क उनीहरुको वास्तविक उमेर भन्दा २ वर्ष बढि बुढो देखिने गरेको छ ।
सन् २०१२ मा अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रातमा ८ घण्टाभन्दा बढि सुत्नाले मुटु सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले बढि सुत्ने मानिस मुटु तथा रगत सम्बन्धी विभिन्न खाले रोग र हृदयाघातबाट समेत अल्पायुमै मर्ने जोखिम १.३ गुणा बढि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बिहान अबेरसम्म सुत्दा यसको गहिरो असर हाम्रो दिमागमा पर्ने गर्दछ । यसले हाम्रो स्मरण शक्ति कमजोर हुन थाल्छ । बिहान समय हाम्रो दिमागका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यस समयमा कुनै कुरा स्मरण गर्दा हामीलाई लामो समय सम्म याद हुन्छ ।
जो मानिस धेरैबेरसम्म सुत्छ उनीहरुलाई कब्जियतको समस्या हुन्छ । पेट ठिक राख्नका लागि आफ्नो शरिरलाई चलाइराख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले शारिरिक ब्ययाम स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ ।
८ घण्टाको निन्द्रा हरेक मानिसका लागि पर्याप्त छ । धेरै बेरसम्म सुत्दा अकाल मृत्यु पनि हुनसक्छ । यो कुरा अनुसन्धानमा पुष्टि भइसकेको छ । कम सुत्ने मानिसहरुभन्दा धेरै सुत्ने मानिसहरुको चाँडै मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले पुष्टी गरेको छ ।
धेरै बेरसम्म सुत्दा टाउको दुखाइको अनुभवहामी स्वयमले गरेका छौँ । यो दिमागमा न्यूरोट्रान्समिटरमा उतारचढावको कारण हुनसक्छ जसमा निन्द्राको क्रममा सिरोटोनिन बढाउन सक्छ र यसले टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउँछ ।
पर्यटन मन्त्रालयद्वारा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव तयार